Maahmaahyo iyo Maareyn wax soo saar | Martech Zone
Khamiis, Juun 29, 2006 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Douglas Karr
Inta badan maahan inaan u fiirsado Qorniinka si aan ugu dhiirrigeliyo maareynta alaabta iyo horumarinta softiweerka, laakiin maanta saaxiib ayaa ii soo diray erayo waaweyn oo talo ah:
Kii edbinta xajistaa wuxuu ku socdaa jidka nolosha, Laakiinse kii canaanta diidaa wuu qaldamaa.
Maahmaahyadii 10: 17
Kii edbinta jecelu aqoon buu jecel yahay, Laakiinse kii canaanta necebu waa nacas.
Maahmaahyadii 12: 1
Saboolnimo iyo ceeb baa ku dhici doona kii edbinta quudhsada, Laakiinse kii canaanta maqla waa la murwayn doonaa.
Maahmaahyadii 13: 18
Ereyo kafiican lamahadli karin. Wax badan baro, fur fur, aqbal dhaliisha, waxna ka baro khaladaadkaaga.
Tags: saxitaankabarashadaaqoonmaaraynta wax soo saarkaMaahmaahyadii